Madda Walaabuu Press: Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin
Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin
Posted by MADDA WALAABUU PRESS on 6/23/2017
Waxabajjii 23, 2017 | Baarentuu Gadaa Irraa
Dhugaan Itiyoophiyaa keessa jiru kan muldhisu ilmi namaa akka saree abbaa hin qabnee addabaabaayitti ajjeefamaa jiraachudha. Saamichi, hidhaa dararaan saboota biyyattii keessumaa saba Oromoorratti gaggeeffamaa jiraachuudha. Dhalattoonni saba Tigraayi qofti akka barbaadan keessa yoo fandalalanii fi hundatti ajaja ta’an kan ifatti muldhatu. Beellii fi dhibeen ummattoota biyyattii fixaa jiraachutu halakanii guyyaa midiyaalee addunyaarraa gabaafama. Dubbii kana caalaatti dhugoomsuuf ammoo hogganaan komishinii ittisa balaa fi qophaai’naa Itiyoophiyaa Mitikkuu kaasaa namni jedhamu Waxabajjii 10 bara 2017 ibsa miidiyaalee fi tola ooltotaaf kenneen waamicha namnimil.10 ol beela’uu ibsee qanqalloo kadhaa qabatee dhihaateera.
Oromoon mirga abbaa biyyummaa qabaa….? ajjeechaan, hidhaan, saamichi irraa dhaabbateeraa..? beelli, hiyyummaan ummata Oromoo har’as akkuma kaleessaa fixaa hin jiru…? jedhaatii gaafadhaa. Yoo garaaf bulaa ta’e innuu ija dunuufatee eeyyee jijjiirame isniin jechuu danda’a. diyaaspooraa dogongorfame yoo ta’e ammoo dogongora isaa fudhatee gocha yakkaa fi qaaneessaa kanarraa of qusata.
Oromoon biyya alaa jiru kan galee biyya isaatti bashannanu, dhiichisee sirbu yeroo ammaa, yeroo ummanni Oromoo dhiigaa jiru, saamamaa fi ajjeefamaa,gabrummaa jala jiraataa jiruu miti. Kan Galee sirbee dhiichisu qabsoo eegalame FXG jabeessee itti fufee ummata isaa bilisoomsee, ummata bilisummaa jala jiru keessatti. kan ta’uu qabus kanuma.